Baiboly pejy 52 - Ny Baiboly
Voalohany < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Manaraka Farany
Eksaody toko 35 (tohiny)
21dia tonga izay rehetra voatariky ny fo mazoto sy izay rehetra manana saina vonona tsara nanolotra fanatitra ho an'ny Tompo hanaovana ny trano lay fihaonana, mbamin'ny fanaka rehetra ao aminy, sy ny fanamiana masina. 22Samy tonga daholo na lahy na vavy; izay rehetra vonona tsara tao am-pony nitondra fampoehana, masom-bola, peratra, fehin-tànana, fanaka volamena isan-karazany; samy nanolotra fanatitra volamena avokoa izy, natokany ho an'ny Tompo. 23Izay rehetra nanana jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, rongony madinika, volon'osy, hoditr'ondralahy voasoka mena, ary hodi-dogaona, dia samy nitondra avokoa. 24Izay rehetra nanokana fanatitra volafotsy na varahina dia samy nitondra ny azy ho an'ny Tompo. Izay rehetra nanan-kazo akasià hanaovana ny zavatra rehetra momba ny fanompoam-pivavahana dia nanolotra izany. 25Ny vehivavy nanam-pahaizana rehetra namoly tamin'ny tànany ka nitondra izay nataony, dia jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika. 26Ny vehivavy rehetra izay voatariky ny fo mazoto sady nanam-pahaizana dia namoly volon'osy. 27Ny loholona kosa nitondra vato berila ary vato fandatsaka an-tranontranony hatao amin'ny efoda sy ny saron-tratra; 28zava-manitra aman-diloilo hatao amin'ny fanaovan-jiro sy ny diloilo fanosorana ary ny zava-manitra mamerovero. 29Ny zanak'Israely rehetra na lahy na vavy izay voatariky ny fo mazoto mba hanana anjara amin'ny asa rehetra nandidian'ny Tompo tamin'ny vavan'i Moizy hatao, dia samy nitondra fanatitra an-tsitra-po ho an'ny Tompo.
30Ary hoy Moizy tamin'ny zanak'Israely: Aoka ho fantatrareo fa Beseleela, zanak'i Ori, zanak'i Hora, amin'ny fokon'i Jodà, no efa nofidin'ny Tompo. 31Nofenoiny ny fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena amam-pahiratan-tsaina ary fahaizana hanao asa samihafa isan-karazany; 32ny mamorona taozavatra vaovao, ny manefy volamena sy volafotsy ary varahina, 33ny misokitra vato halatsaka an-tranontranony, ny mandrafitra hazo ary ny mahavita ny asa samihafa rehetra ilam-pahaizana. 34Efa nataon'Andriamanitra ao am-pony koa ny fahaiza-mampianatra; ary toy izany no nataony tamin'i Ooliaba, zanak'i Akisameka, amin'ny fokon'i Dana. 35Samy efa nofenoiny fahaizana hahavitana ny asa rehetra fisokirana sarin-javatra sy ilam-pahaizana, hanenomana jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, rongony madinika, asina sary samihafa, hanaovana taozavatra samihafa isan-karazany ary hamoronana fomban-taozavatra vaovao.
35Ny efitra lamba dia natao tamin'ny jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika mihasina, nosoratana sarin-kerobima: asam-panenona mahay;
Pejy: Voalohany < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2465 seconds